Izibonelelo ezi-7 eziphezulu zeSemax ekufuneka uyazi ngaphambi kokuSebenzisa-iFcoker
Izibonelelo eziPhezulu ze7 zeSemax omele uyazi ngaphambi kokuSebenzisa
1. Yintoni iSemax Peptide?
2. Ukusetyenziswa kwesemax
3. Izibonelelo zeSemax
4. Isebenza njani iSemax?
5. Ndiyisebenzisa njani i-Semax?
6. Ngaba zikho iziphumo ezibi xa usebenzisa i-Semax?
7. Ngaba kufuneka usebenzise i-Semax stack xa usebenzisa?
8. Yintoni umahluko phakathi kweSemax vs Selank?
9. Ndingayifumana phi i-Semax kwi-Intanethi?
I-Phcoker ngumenzi oyingcali ukuvelisa i-semax powder
I-Semax yaphuhliswa kwii-1980 kunye nee-90s, emva koko zamkelwa eRussia kunyango lwexhoba lokubethwa, ukonakala kwengqondo kunye nokuwohloka kwengqondo. I I-peptide yesirax ifakwe kwizifundo ezahlukeneyo zabantu eRussia, kwaye ibonakalisile ukuba inokwakha iipropathi zokuphucula ukuqonda.
Kwelinye icala, kukho ubungqina oboneleyo obufunyenweyo malunga nokuba ichiza linokunceda njani ukunciphisa uxinzelelo kunye nokuphucula imeko yomsebenzisi. I-Semax isetyenziswa njenge-nootropic esemgangathweni, kodwa ikwanokusetyenziswa okongezelekileyo njengokuqinisa impilo yengqondo kunye nokunyusa amajoni omzimba phakathi kweminye imisebenzi. Izibonelelo zeSemax zinokuviwa kuphela xa iyeza lithathwa ngokuchanekileyo. Nangona kunjalo, qiniseka ukuba ufumana isikhokelo sokusetyenziswa kugqirha wakho ukufumana iziphumo ezingcono kunye namava.
Isemax (80714-61-0) lonyango lwepeptide olwenziwe eRashiya kwii-1980s ukunceda kunyango nasekulawuleni ukuphazamiseka okunje ngokubetha. Namhlanje, ukuxhalaba kweSemax kudweliswe kuluhlu lwaseRussia lwamachiza ayimfuneko emva kokubonisa ukusebenza kwawo kunyango lweemeko ezahlukeneyo zempilo.
Oogqirha bayalela iSemax njengechiza le-nootropic emva kokuqonda ukuba inokudlala indima ebalulekileyo ekuphuculeni ukusebenza kwememori kunye nokunciphisa uxinzelelo. Nangona iRussia neUkraine zikuvumile ukusetyenziswa kweli chiza, amanye amazwe anjengeMelika yaseMelika akakayamkeli nangona kungqineke kubalulekile kunyango lweemeko ezahlukeneyo zempilo. Nangona kunjalo, ayikuthinteli ekusebenziseni umgubo weSemax.
Ngaphandle komgubo weSemax oqhelekileyo, kukho izinto ezimbini ezahlukeneyo ezikhoyo kwintengiso, kodwa ziphantse zisebenze ngendlela efanayo. Babandakanya i-Na-Semax-Amidate kunye ne-N-Acetyl. Okwangoku, akukho phononongo lubanzi luqhutyiweyo okanye lubhalwe malunga neenguqulelo ezimbini zeSemax. Nangona kunjalo, kuvavanyo lweSemax, abanye abasebenzisi baxela ukuba iNa-Semax-Amidate inamandla okuphucula ukugxila ngelixa i-N-Acetyl Semax isomeleza ngakumbi. Iziphumo zeSemax zinokwahluka ukusuka komnye umntu ukuya komnye, kuxhomekeke kwindlela umzimba ophendula ngayo kumthamo. Ukhululekile ukuba uzame nayiphi na inguqulelo yeSemax kodwa qiniseka ukuba ubandakanya ugqirha wakho kuyo yonke inkqubo yedosi.
The I-Semax powder iyafumaneka kwiivenkile ezahlukeneyo ezikwi-Intanethi nakwiindawo ezikufutshane nawe apho unokwenza iodolo yakho nangaliphi na ixesha. Fumana i-Semax yokuthengisa kumthengisi onokuthenjwa nonamava okanye umthengisi. Ayingabo bonke abathengisi beziyobisi ababonelela ngeemveliso ezisemgangathweni, kwaye kuhlala kungumbono olungileyo ukufunda ababoneleli beSemax ngaphambi kokwenza iodolo yakho. Qonda ukuba ivenkile isebenza njani kwaye izakuthatha ixesha elingakanani ngaphambi kokuba ufumane iSemax (80714-61-0).
Kuyacetyiswa ukuba uye kuhlolo lonyango ngaphambi kokuba uqale ukuthatha eli chiza. I-Semax iyathengiswa sisiyobisi, kwaye ke, ugqirha wakho kufuneka abe ngumntu olungileyo ukuseta idosi efanelekileyo emva kokuvavanya imeko yakho. Inkqubo yonyango nayo ifuna ukubekwa esweni yingcali yezempilo ukufumana iziphumo ezingcono.
Xa uthenga iSemax (80714-61-0), yigcine kude nabantwana ekufikeleleni nakwifriji kuba inokuthotywa njengezinye iipeptides. Ngcono, amava eSemax, qinisekisa ukuba uyayithobela yonke imiyalelo yedosi. Ungaze uhlengahlengise idosi ngaphandle kokwazisa ugqirha wakho.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, iSemax peptide ibalulekile kwilizwe lezonyango, ngakumbi kunyango lweemeko ezahlukeneyo. E-Rashiya, ichiza lavunywa emva kokuqonda ukuba linokunceda ekulawuleni ukuphazamiseka kokujikeleza okunje ngokubetha. Nangona kunjalo, uphononongo lweSemax oluqhutyelwe iminyaka lutyhile nezinye izifo ezinokunyangwa ngempumelelo liyeza.
Amazwe ahlukeneyo okanye oogqirha basebenzisa i-Semax ukunyanga iimeko ezahlukeneyo zempilo. Ixhala leSemax lisetyenziswa ngaphakathi, kodwa kuphela ngamathontsi ahluka ngokuxhomekeke kwimeko yonyango ephantsi konyango. Kukho ifom ye-Semax enesitofu ekufuneka ilawulwe kuphela yingcali yezempilo. Njalo khumbula ukugcina iziyobisi kwifriji.
I-Semax yi-nootropic engqine iluncedo kakhulu ekuncedeni ubuchopho bakho ngeendlela ezahlukeneyo. Ukusukela ekubeni i-Semax ivunyelwe ukusetyenziswa kwamayeza kwi-2011, iyeza lisetyenziselwe ukunyanga iimeko ezahlukeneyo zempilo. Xa uthathwe ngokuchanekileyo, ichiza linokuzisa ezi zibonelelo zilandelayo;
1. Ukulula Iimpawu ze-ADHD
I-Semax ineempembelelo ezinceda kunyango lweempawu ze-ADHD. Izifundo zonyango zibonisa ukuba i-Semax iphucula inkumbulo kunye nokunyusa ii-neurotransmitters, ezihlala ziphantsi kubantu abane-ADHD. Okwangoku, iSemax lolunye unyango olunokubakho kubantwana abane-ADHD eRussia. I-ADHD yimeko ye-neurodevelopmental enokuthi iphazamise amanqanaba e-dopamine, kwaye Isisix kungqineke kuluncedo kakhulu ukulungisa le ngxaki.
2. Uthintela ukonakaliswa kweOxidative
Ekuqaleni, i-Semax yayenzelwe ukunceda ukubetha kwentliziyo kunye nokuhlaselwa sisifo sephepha. Kwiminyaka edlulileyo, ichiza beliluncedo ekulawuleni nasekuthinteleni ukonakala kwe-oxidative. Umonakalo we-Oxidative wenzeka ngenxa yoxinzelelo lwe-oxidative, ukungalingani kweeradicals zasimahla kunye nee-antioxidants emzimbeni wakho. Uxinzelelo olukumandla lwe-oxidative olubangelwa kukuzivocavoca komzimba luyanceda nokulawula ukukhula kwezicubu njengoko kubangela ukuveliswa kwe-antioxidant.
Nangona kunjalo, uxinzelelo lwe-oxidation lwexesha elide lubangelwa zizifo okanye iimeko ezinje ngokuhlaselwa sisifo kumonakalo weeprotheni, iiseli zomzimba kunye ne-DNA. Ngoku ka Izifundo zesemax, ukubandakanywa kwesiyobisi kunyango lwe-stroke kuye kwanegalelo elibonakalayo ekubuyiseleni inqanaba lemisebenzi ye-neurological eyonakeleyo. Ezi ziphumo zinceda amaxhoba okuphepha ukuphepha ukuphazamiseka kwemoto, iswekile kunye nokugxila.
3. Inceda ukunciphisa uxinzelelo
Uxinzelelo lunokubangelwa ziimeko ezininzi ezinje ngokugula, ukungalali, okanye ukwenzakala emzimbeni. Imizimba yabantu yahlukile, kwaye ke, baphendula ngoxinzelelo ngokwahlukileyo. Umzekelo, imizimba yabanye abantu iphendula kuxinzelelo ngokwandisa imveliso yee-enzymes zesibindi. Izifundo zibonakalise oko Isemax yoxinzelelo ukunciphisa ukuveliswa kwe-enzyme yesibindi xa kuhanjiswa kwizilwanyana ngexesha lophando lwezonyango. Ngakolunye uhlangothi, iingcali zempilo ziye zatsho ukuba i-Semax iguqula imeko yemizimba ebangelwa luxinzelelo lomzimba.
4. Kwandisa ukuhamba kwegazi
Owona mngcipheko uyingozi kakhulu kukubetha kukungabikho okanye ukuhamba kwegazi kubuthathaka kubuchwephesha, imeko eyaziwa ngokuba kukungabikho ngokwaneleyo kwe-cerebrovascular. Ukusetyenziswa kwe-Semax kunyango lwe-stroke kuthumele iziphumo ezilungileyo ngokuphucula ukuhamba kwegazi kwingqondo. Eli chiza linefuthe nasekuthinteleni intliziyo yakho ekukhuleni xa unexinzelelo lwegazi oluphezulu. Emva koko, oku kuyakukhusela ekuhlakuleni nasiphi na ukungaphumeleli kwentliziyo, nokuba uphantsi kohlaselo lobushushu.
I-5.Ikhulisa i-Brain-Desered Neurotropic Factor (BDNF)
I-BDNF idlala indima ebalulekileyo ekusindeni kwe-neurons, ukukhula kwengqondo, nakwiplastikhi yee-synapses. Amanqanaba asezantsi e-BDNF anokukhokelela okanye enze mandundu uxinzelelo kunye noxinzelelo. Njengokuba ikubhengeza kwiziphumo ebezingalindelekanga ezincinci, i-Semax ikwazibonakalise njengeyona nto ibalaseleyo yokuphucula i-BDFN kunye ne-antidepressant. Iyeza linokuphucula imveliso ye-BDNF ithenge ukuya kuthi ga kwi-800%.
Ngokwandisa imveliso ye-BDNF, i-Semax iyanceda ukulawula kunye nokunciphisa uxinzelelo kunye nokudakumba. Izifundo zonyango lwe-antidepressant zibonakalise indlela amanqanaba aphezulu e-BDNF anefuthe elihle ekunciphiseni uxinzelelo. I-Semax inyusa ii-receptors ze-limbic system ukuze zivelise i-adenosine, dopamine, i-serotonin, kunye ne-histamine, enceda ngokulula
Iimpawu ezinxulunyaniswa ne-ADH, uxinzelelo kunye noxinzelelo. Ukonyuka kwazo zonke ezi neurotransmitters kunyusa inkuthazo, ke oko kuphucula ukugxila kunye nemveliso.
6. Isemax inokunceda ekunciphiseni iintlungu
Xa ufumana ezinye iintlungu, ingqondo yakho iya kukhupha rhoqo ii-neurotransmitters ezaziwa ngokuba yi-enkephalins, ezithothisa imvakalelo yentlungu. Ikwatshintsha nembono yentlungu ngokuthi inciphise imvakalelo yokungena xa usentlungwini.
I-Enkephalins inokulawula kuphela iintlungu zomzimba kangangexesha elithile; ke, i-Semax inceda ngokuthintela ukuqhekeka kwayo kunye nokwandisa imveliso yayo. Ke, ukuncedisa ukunciphisa ukuqina kwentlungu emzimbeni wakho ixesha elide kwaye loo nto yenza i-Semax ibe yindlela yokunciphisa iintlungu.
7. Isemax iphucula ukugcinwa kwememori
I-Neototransmitters efana ne-enkephalins inefuthe lokuqonda, kwaye xa yonyuswe, idlala indima ebalulekileyo ekwenzeni iinkumbulo kunye nokulawula imvakalelo. Uphando olwenziwe eRashiya, lwabasebenzi abasempilweni, I-Semax powder kwandisa ingqalelo yabo kunye nokugcinwa kwememori. Izifundo zesayensi zibonisa ukuba ukukhuthaza ukujikeleza kwegazi okufanelekileyo kunye nokukhuselwa kwe-oxidative kwingqondo yomntu kuphucula inkumbulo.
Ukonyuka kwamanqanaba e-BDNF kwi-hippocampus kuthiwa kubalulekile ekuphuculeni inkumbulo kuba i-hippocampus liziko lobuchopho kwiimvakalelo kunye nenkumbulo. Kwelinye icala, i-BDNF ikwanceda ekuphuculeni ukukhumbula, inkumbulo, kunye nokukwazi ukufunda nokugcina ulwazi olutsha. I-BDNF ivuselela ukuveliswa kwe-Neurogeneis, esisizukulwana sendlela yeengqondo ezisinceda ekuphuculeni ukusebenza kwengqondo nasekuqhubeni.
I-Semax yi-nootropic enamandla kunye neyeza xa lisetyenziselwa ukunyanga iimeko ezahlukeneyo zempilo. Nje ukuba ingene kwinkqubo yakho yomzimba, i-Semax yonyusa amanqanaba asekwe ebuchosheni (BDNF) amanqanaba kunye nokusebenza nako.
Ngokwesayensi, i-BDNF ziiproteni ezikhuthaza impilo yonke yengqondo ngokukhusela nokomeleza iiseli zengqondo, ukukhuthaza ukukhula kweeseli zengqondo, kunye nokukhuthaza ukungasebenzi kakuhle kwengqondo ngokubanzi. Ngokwesiqhelo, nayiphi na i-nootropic eyonyusa amanqanaba e-BDNF yonyusa ukuqonda kubasebenzisi abaninzi, kwaye iSemax ibonakalise ukuba ngumzekelo ogqibeleleyo wesongezelelo seBDNF sokomeleza.
Ngamanye amaxesha, isitaki seSemax sisetyenziselwa ukuphucula imeko kunye nesiyobisi esiphumlayo. Kungenxa yokuba iyonyusa imisebenzi ye-dopamine kunye ne-serotonin emzimbeni wakho, eyi-neurotransmitters enefuthe elibonakalayo kuxinzelelo noxinzelelo. Ukutyhubela iminyaka, oogqirha baye baqhubeka nokufumanisa iimeko ezahlukeneyo zempilo ezinokuqwalaselwa yiSemax.
Idosi yesemax ixhomekeke kwimeko yezempilo phantsi konyango, kwaye idosi kufuneka isetwe yingcali yezonyango. Okucetyiswayo Umthamo wesemax ukusuka kwi300mcg ukuya kwi-600mcg. Nangona kunjalo, abasebenzisi abatsha bacetyiswa ukuba baqale ngeedosi ezisezantsi, ezinokulungiswa kamva ngugqirha emva kokujonga impendulo yomzimba wakho kwichiza.
Ngeziyobisi, akukho mntu unokubeka emngciphekweni wokuthatha idosi ephezulu ekuqaleni kuba inokuthi ikhokelele kwiziphumo ebezingalindelekanga ezibi. Ukuthintela nawuphi na umngcipheko onxulumene neli chiza njengokulahleka kweenwele zeSemax kuhlala kungumbono olungileyo ukuya kuvavanyo lonyango ngaphambi kokuthatha eli chiza nangasiphi na isizathu.
I-Semax ithathwa ngokungathathi ntweni, kwaye kuya kufuneka uthathe i-2 okanye i-3 encinci yokuhla kwempumlo nganye kabini okanye kathathu ngemini kumjikelo obekwe ngugqirha wakho. Ezinye zeemeko ezinjengokuthatha i-Semax yexesha lokubuyisela emva konyango, kuya kufuneka uthathe amathontsi ama-4 kwimpumlo nganye, amaxesha amathandathu ngosuku. Kwimemori yePost narcosis okanye ukuphazamiseka kwengqondo, idosi ekhuthazwayo ngamaconsi ama-3 kwimpumlo nganye kathathu ngemini. I-Semax yoxinzelelo lwe-2 ukuya kwi-3 yehla kwimpumlo nganye, kathathu ngemini yidosi ekhuthazwayo.
Ngokufanelekileyo, i Idosi yenaliti yesemax Kuya kuxhomekeka kwimeko yezempilo phantsi konyango. Nangona kunjalo, namathela kwimiyalelo yedosi kagqirha njengoko ukucebisa umenzi kungangasebenzi kuwe. Abanye abasebenzisi banokufumana iziphumo ezisemgangathweni emva kokuthatha iidosi ezisezantsi, ngelixa abanye kuya kufuneka bathathe iidosi eziphezulu ukufumana iziphumo ezifunwayo. Yinto eqhelekileyo leyo kuba amandla omzimba womntu ahlukile komnye umntu.
a) Itafile yeshemax
Isemax nayo inokulawulwa ngenaliti, inokuba yeyona dosage ilungileyo yabasebenzisi abangakhuselekanga ngephunga lomphunga. Zombini ii-Semax Nasal zokutshiza kunye neefom zesitofu se-subcutaneous zisetyenziselwa iinjongo ezifanayo kuphela ukuba ziyahluka kwisicelo sabo.
Ugqirha wakho unokukucela ukuba ukhethe enye ifom yethamo phakathi kwezi zimbini. Ngokwesiqhelo, imithamo yenaliti yomelele xa ithelekiswa nolunye uhlobo lweSemax. Ke akusayi kufuneka uthathe inaliti rhoqo njengamaconsi egazi ekufuneka uwathathe kabini okanye kathathu ngosuku okanye nangaphezulu.
b) Idosi yenaliti yesemax
Nangona ku Inaliti yesemax Inika enye indlela ebalaseleyo kwithamo lempumlo, soloko uqinisekisa ukuba ufumana inaliti kugqirha wakho. Iimeko ezahlukeneyo zifuna idosi eyahlukileyo. Uviwo lonyango luya kukhokela amayeza akho ekumiseleni idosi elungileyo. Idosi yeSemax kufuneka ibe phakathi kwe-300mcg ukuya kwi-600mcg.
Umthamo unokuncitshiswa ngakumbi ngokuxhomekeke ekuphenduleni komzimba wakho kwidosix yenaliti yokuqala yeSemax nokuba uhlengahlengise phezulu. Ukuba awuqinisekanga malunga nokuzitofa, unokucela ugqirha wakho ukuba akuqeqeshe okanye ulungiselele ukutyelelwa rhoqo ukuze uthathe idosi yakho. Musa ukubeka emngciphekweni wokuzifaka ngokwakho ukuba awazi ukuba ungayenza njani njengoko inokubangela ezinye iingxaki zonyango.
I-Semax ayisisiyobisi esaziwayo e-United States of America kuba i-FDA ayivume ukusukela oko yayiphuhliswa. Nangona kunjalo, luninzi uphando kunye novavanyo olwenziwe eRussia olubonisa ukusebenza kwe-Semax.
Iyeza libonakalisile kuvavanyo olwahlukeneyo lwezonyango ebantwini, kwaye phantse lonke uvavanyo alunikeli ziphumo zibi zeSemax. Oko kwenza i-Semax yenye yezona nootropic zikhuselekileyo kwintengiso yanamhlanje. E-Rashiya, i-Semax iluncedo kunyango lweemeko ezahlukeneyo zonyango ezinjengeentloko ze-migraine, ukubetha, kunye nokuphazamiseka kwengqondo.
Okona kumangalisa kakhulu kwesi siyobisi kukuba sinamandla aphezulu, kodwa nokuba sithathwe kwiidosi eziphezulu, akunakuba yityhefu emzimbeni wakho. Nangona kunjalo, i-Semax ayizange isetyenziswe ngabantu abaninzi ngaphandle kweRussia kude kube kutshanje xa i-Ukraine ivume ukusetyenziswa kwayo. Inqanaba lokunyamezeleka komzimba wakho linokugqiba, iziphumo zeSemax oya kuzifumana emva kokuthatha iyeza.
Iziphumo ebezingalindelekanga ezincinci zeSemax zixeliwe ngabanye babasebenzisi beSemax njengomlomo owomileyo, ukwanda kokubila, isicaphucaphu kunye nokozela. I-Semax kunye nelahleko yeenwele yenye yeziphumo ebezingalindelekanga ezichazwe ngabasebenzisi beSemax. Zonke ezi ziphumo bezingalindelekanga kunqabile ukuba zichazwe, kodwa oogqirha banokuzilawula. Imizimba yabantu yahlukile, kwaye ukuba unokufumana naziphi na ezinye iziphumo ezibi zeSemax yazisa ugqirha wakho kwangoko ngoncedo.
Ngokwesiqhelo, i-Semax ihambisa iziphumo ezisemgangathweni xa zisetyenziswa zodwa kunyango lweemeko ezahlukeneyo zempilo. Nangona kunjalo, njengama-nootropics amaninzi, unokufumana ukusebenza ngokugqibeleleyo kweSemax xa uyithatha ngesitaki. I-Kratom, ekwayenye i-nootropic eyaziwayo kwimarike esetyenziswa njengento evuselelayo kunye nevuselelayo, yenza ukubekeka kakuhle kakhulu nge-Semax. Kangangoko i-Semax inokuphumla kwaye yomelele umsebenzisi, ukuyithatha nge-Kratom kuphucula iziphumo ezifunwayo.
Kuyacetyiswa ukuba uqwalasele ukugcwala kweSemax kunye nePhenylpiracetam ngenxa yamandla otyumkileyo anokubangelwa kukuthatha eli chiza ngesishukumisi. I-Phenylpiracetam yeyona nootropic iphambili yokuqonda kodwa inyusa kancinci. Kwelinye icala, abasebenzisi abaninzi baxele ukufumana izibonelelo zeSemax xa bezidibanisa nezinye izinto ezinje nge curcumin evumela ukuhamba kwamandla okuzinzileyo okuqhubekayo emzimbeni.
Abasebenzisi be-Semax abafumene amaxhala okonyuka kufuneka bacinge ngokudibanisa ichiza ne-Ashwagandha, esebenza njengendawo yokuphumla. I-Ashwagandha yindawo enamandla Nootropic ezinokukunceda ekupholiseni i-Semax enokubakho i-spikes yexhala.
Konke kuyo yonke, i-Semax inokufakwa kwi-nootropics eyahlukeneyo ukukhulisa iziphumo ezilindelekileyo. Nangona kunjalo, ukuba awuqinisekanga malunga ne-nootropic yokudibanisa kunye ne-Semax, uhlala udibana nodokotela wakho. Ukubeka okungachanekanga kuyingozi kakhulu kwimpilo yakho njengoko kunokukhokelela kwiziphumo ezibi kakhulu.
I-Semax kunye ne-Selank zonke zi-nootropics eziphuhliswe eRussia, kwaye ngamanye amaxesha zisetyenziselwa ukunyanga iimeko ezifanayo zezempilo njengokuphazamiseka kohlengahlengiso kunye noxinzelelo. Kwiziphumo eziphezulu, la mayeza mabini anokusetyenziswa kunye. I-Selank yi-peptide ye-anxiolytic enciphisa imiphumo emandla yoxinzelelo kwaye iyaziwa ngokungabangeli naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga njenge Semax.
Ngokwezakhiwo, uSelank uvela kwi-Tuftsin ye-endo native, edlala indima ebalulekileyo kumasosha omzimba wakho. Ukolula iimpembelelo zeSelank kunye nokucothisa ukuqhekeka kwepeptide, abavelisi babandakanya iGlyproline kulwakhiwo lwayo.
Imo yeentshukumo zeSelank kwingqondo nayo yahluke kakhulu; isebenza njengechiza elichasene noxinzelelo nge-anti-asthenic kunye ne-antidepressant yokuxhasa eyenza imisebenzi yokuqonda neyenkumbulo. Ke, Isisix vs I-Selank Iyakwazi ukuxoxwa, kodwa omabini la machiza aphuculwa ngokuqondakalayo. I-Selank ilawulwa ngaphandle kwe-intranasally, kwaye i-dosage ingahluka ngokuxhomekeka kwimeko phantsi kwonyango.
La machiza mabini ahluka ngakumbi kwindlela asetyenziswa ngayo ukunyanga iingxaki zempilo ezahlukeneyo. I-Semax inamandla ngakumbi ekuphuculeni ukuqonda kunye noxinzelelo, ngelixa uSelank ehambisa iziphumo ezisemgangathweni xa zisetyenziswa njengexhala lokulwa noxinzelelo. Nangona kunjalo, omabini la machiza anyusa amanqanaba e-BDNF, kwaye ngamanye amaxesha anokufakwa kunye, njengoko bekutshiwo ngaphambili. Ngolwazi oluthe kratya malunga neSemax vs Selank thethana nengcali yezonyango.
Ukuba useRussia, iSemax ithengiswa phantsi kommiselo kagqirha. Nangona kunjalo, e-United States of America, iyeza alilawulwa kancinci, nangona i-FDA ingavumanga. Oko kuthetha ukuba unokufikelela kwiivenkile ze-nootropic ezikwi-Intanethi. Sisoloko sicebisa abasebenzisi beSemax ukuba balumke kakhulu kwaye bathathe ixesha labo lokufumana owona mthengisi weSemax. Yenza uphando lwakho, jonga uphononongo lwabathengi ukuze uqonde ukuba umthengisi weSemax usebenza njani ngaphambi kokwenza iodolo yakho. Khumbula, ayinguye wonke umthengisi weSemax omfumanayo kwintengiso onokuthenjwa.
Iindaba ezimnandi zezokuba singababoneleli beSemax abakhokelayo kummandla. Unokwenza iodolo yakho kwiwebhusayithi yethu kwaye uqiniseke ukuba uyayifumana imveliso yakho ngexesha elifutshane elinokwenzeka. I-Semax iyathengiswa kunye ne-Semax stack zonke ziyafumaneka kwivenkile yethu ekulula ukuyisebenzisa kwi-Intanethi.
Singabantu abanenkathalo Umthengisi wepoda yesemax, kwaye ke, silumkisa bonke abathengi bethu ukuba bathathe iziyobisi ngaphandle kokwenza uviwo okanye ukubandakanya ugqirha kumjikelo wonke wedosi. Kwakhona, yazisa ugqirha wakho kwangoko ufumana naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga ezibi.
IDololotov, OV, Eremin, KO, Andreeva, LA, Novosadova, EV, Raevskii, KS, Myasoedov, NF, kunye neGrivennikov, IA (2015). I-Semax ithintela ukusweleka kwe-tyrosine hydroxylase-positive neurons kwiseli exubeneyo yenkcubeko yeseli evela kwi-embryonic rat mesencephalon kwimodeli ye-6-hydroxydopamine-indased neurotoxicity. Ijenali ye-Neurochemical, 9(4), 295-298.
IKoroleva, i-SV, kunye neMyasoedov, NF (2018). I-Semax njengesiyobisi sonyango kunye nophando. Ingcaciso ngebhayoloji, 45(6), 589-600.
UManchenko, DM, Glazova, N., Levitskaia, NG, Andreeva, LA, Kamenskiĭ, AA, kunye neMiasoedov, NF (2010). I-Nootropic kunye ne-analgesic ye-Semax elandela iindlela ezahlukeneyo zolawulo. Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal imeni IM Sechenova, 96(10), 1014-1023.
Malyshev, AV, Razumkina, EV, Dubynin, VA, kunye neMyasoedov, NF (2013, ngoMeyi). I-Semax ilungisa ukungasebenzi kakuhle kwengqondo okubangelwa kukwaziswa kwangaphambi kokubeleka kwe-valproic acid. Kwi IiSayensi zebhayiloji zaseDoklady (Vol. 450, No. 1, iphe. 126). Isayensi ye-Springer kunye neMedia yeShishini.